Kismaayo News » FOOLATAYE MAXAY DHALI DOONTAA?
FOOLATAYE MAXAY DHALI DOONTAA?
Soomaaliya waxay cagaha la gashay marxalad cusub, waxay ka gudubtay marxaladdii hore ee ku meelgaarnimada una gudubtay dowlad dhameystiran. Waxu dalka yeeshay dastuur cusub, baarlaman cusub,raisul wazaara cusub iyo madaxweyne cusub islamarkaana ah madaxweynihii ugu horeeyay oo rayid ah muddo ka badan 40afartan sano, waxaa la xoreyay inta badan gobolada dalka.
Dhamman marka la isu geeyo waxyaaha aan soo xusnay waxa dadka soomaalida ah u bidhaamay rajo wanaagsan iyo in waqti dhow la halmaami doono waxyaabihii la soo maray sanadihii bur’burka iyo halaaga.
Soomaaliya maanta ma aha jamhuuriyadii demograasiga soomaaliyeed ee hore, waa Jamhuuriyad fedraal ah oo ka sameysan maamulo garba siman ah oo ku mideysan maamul dhexe oo loo wada siman yahay, mana jiri doono maamul ama gobol ku xad gudbi kara siyaadada gobol kale. Waxad mooda in inbadan oo ka mid ah soomaalida aysan ka daadagi macnaha fedraalka ama iska dhega marinayaan laakiin waa xaqiiqo na hor taala oo dastuurkeena ku qeexan.
Marka dib loo eego qaylo dhaantii ka soo yertay soomaalida ku nool daafaha dunida gaar ahaa Banaadir, baay,Sh. dhexe iyo Hiiraan ka dib xoreyntii Caasimada Gobolka Jubada-hoose ee Kismaayo waxaad moodaa in qarankii soomaaliyeed foolanayo meyd sababo la xiriira faragelinta lagu hayo gobolada qaar iyo caddaalad darro laga tirsanayo dowlada dhexe.
Qaar ka mid ah ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee xoreysay magaalada Kismaayo aya muujiyay niyad jab ka soo gaaray hadalladii ka soo yeeray qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed iyo weliba dowlada dhexe ee soomaaliya, waxay sheegeen in hoos u dhac ku yimid rajadii ay ka qabeen qaran soomaaliyeed oo cadaalad ah. ” waxan soo xasuustay 1991-dii, waayo waxan ahay askari soomaaliyeed oo naftiisa u huray xoreynta dhul iyo shacab soomaaliyeed mana helin mudnaanti aan xaqa u lahaa sida ciidamada Muqdisho iyo Beladweyn, ma aha in tashwiish nala geliyo ” waxa yiri mid ka mid ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan Kismaayo oo aad uga xumaaday hadaladii mediyaha lagu faafiyay.
Prof.Ken Menkhaus Waa nin Mareykan ah oo daneeya arimaha Soomaaliya islamarkaana wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka mareykanka.
Intiini dhageysatay idacadda VOA-da laanteeda afka soomaaliga ayaa weydiisay su’aalo la xiriira Kismaayo. Inkasta oo aan aaminsanahay inuu xibin ka yahay kooxaha mareykanka u qaabilsan kicinta xasaradaha hadba dalkii la doono, hadana waxad moodaa inuu dhaxdhaxaad ka ahaa arinta Kismaayo.
Nuxurka Jawaabaha la xiriira suaalihii Kismaayo laga weydiiyay oo kooban:
1. Kenya uma aysan geli soomaaliya dano gaar ah, sida shidaal, waxay u timid arimo muhim ah oo la xiriira dhanka amaanka.
2. Maamul u sameynta Kismaayo waxay u taalaa dadka reer Kismaayo una maleyn maayo inay leedahay owood iyo sharci ay ku fara geliso dowlada dhexe, laakiin waxa muhim ah in reer kismaayo wada hadlaan.
3. Kala shakigii u dhaxeyay Kenya, Ethiopiya iyo Beelaha soomaalida qaar waxa la gaaray isfaham.
Prof. ken oo sii wata hadalkiisa islamarkaana ku jaha wareeray su’aalaha qaabka daran ee VOA-da aya wariyihii ku celiyay su’aasha ah “Yaa u sameynaya maamul gobolda laga xoreyay Al-shabaab”?, oo la micno ah howsha Kismaayo keliya uma taalo ee waxay u taalaa dhammaan gobolada dalka.
In rajada wanaagasan ee hadda muuqata lagu naaloodo ma aha mid sahlan waa mid u baahan cadaalad iyo sinaan, ilaalinta axdiga iyo balamaha lagu hashiiyay sida ku dhaqanka dastuurka fedaraalka IWM. Sababtoo ah cadaalad xumo iyo sadbuursi waa waxa maanta halkan na dhigay.
Waxa jira shucuur dareen iyo kacsanaan ah oo laga dareemayo Guud ahaan Gobolada Jubooyinka iyo Gedo iyo weliba Puntland, taasoo la xiriirta shirar la sheegay inay Muqdisho uga socdaan Beelaha dega Bay iyo Banaadir islamarkaana lagu lafa gurayo arimo la xiriira Jubooyinka iyo Gedo ilaa iyo hadana lama oga qodobada miiska saaran iyo waxa xigi doona.
War saxaafadeed maanta ka soo baxay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Puntland aya lagu tibaaxay dareenka shacabka reer Puntland ay ka qabaan faragalinta laga maleegayo Caasimada.
Isku soo duub, guusha soomaaliya waa mid ku xiran hadba sida looga fooliyo.Inkasta oo anan jubooyinka looga farxin hadalkii ka soo yeeray Madaxweyne Hassan, hadana waxa laga dhur’sugaaba waa talaabada ay qaadaan madaxweyne Hassan Sheik iyo raiisul wazaaraha cusub Mudane Saacid,
Waxa marag noqon doona maalmaha ama bilaha soo socda in soomaalida cagta saarto dhabihii nabada, cadaalada iyo sinaanta islamarkaana la ilaaliyo qodobada ku qeexan dastuurka ee quseeya maamul u sameynta Gobolada iyo in dib loogu noqdo 1991-dii!!!!!!